हज्जारौ-हज्जार बर्ष पहिलेका स्वास्थ्य रहन यी प्राचीन ११ सुत्र जान्नुहोस् - VOICE OF NEPAL
हज्जारौ-हज्जार बर्ष पहिलेका स्वास्थ्य रहन यी प्राचीन ११ सुत्र जान्नुहोस्
२९ बैशाख २०७६, आईतवार २३:४५ 131 ??? ???????
आयुर्वेदिक चिकित्सा र प्राचीन नेपालको उपचार रहस्य दुनियामा सबैभन्दा शक्तिशाली कल्याणकारी सुत्र मानिन्छ । यो हज्जारौं हजार साल पुराना हो, यो सबैभन्दा पुरानो जीवित समग्र चिकित्सा प्रणालिमा पर्दछ । यसले स्वास्थ्य र दीर्घायुका लागि जीवनबुटी समान काम गर्दछ ।
आफ्नो शीर उत्तर र खुट्टा दक्षिण पारेर सुत्न वा बस्न सँधै बच्नुहोस् । यो वैज्ञानिक कारणपनि ठिक हुन्न ।
जब तपाई उठ्नुहुन्छ । त्यो बिहानको घाम भन्दा पहिले हुनुपर्छ । घाम लागेसम्म सुत्नु ठिक हुनेछैन ।
कपाल वा अनुहारको त्वचा सुन्दर बनाउन तेल चिकित्सा अपनाउनुहोस् । एक आयुर्वेदिक तेल उपचारले उमेर घटाएर यौवन देखाउनेछ । एक लोचदार युवापन देखाउनेछ ।
स्वस्थ रहन खानामा तरकारीको मात्र अधिक बनाउँनुहोस् । घरमा आफै पकाएर खानुहोस् । रक्सी सेवनबाट बच्नुहोस् ।
बेसार र केसरको प्रयोग गरे छालाको रंग चम्किलो बन्नेछ । स्वस्थ रहनेछ ।
नारिबलको तेल धार्मिक रूपमापनि महत्व छ । त्वचा र शरीरमा लगाउँदा त्यति नै फाईदा छ । यो एक प्राकृतिक मॉइस्चराइज़र हो ।
श्वास व्यायाम (प्राणायाम को रुपमा लिइन्छ । योग र ध्यानले स्वस्थ बनाउनेछ ।
यसलेपनि अति फाईदा दिन्छ ।
हर्बल उपचारका साथ, नीम र जड़ों जस्तै अलैची, जीरा अधिक मात्रामा सेवन गर्नुहोस् । यसले पाचन क्षमता बढाएर फाईदा दिन्छ ।
हामी खासगरी तीन पटक भोजन गर्छौ । दोस्रो भोजन धेरै खाए केही फरक पर्दैन । जब सूर्य उच्चतम बिंदुमा हुन्छ त्यो बेला हाम्रो पाचन अग्निपनि चरममा पुग्छ । यसैले मध्यान्ह्मा भरपुर खानु । सूर्य ढल्किदै गएपछि खाना कम गर्नु ।
नून, चीनी लाई जतिसक्दो कम गर्नुहोस् । यसको सट्टा प्राकृतीक नून र चीनिको स्वाद प्रयोग गर्नुहोस् ।